Banyere anyị - Shangke Chemical
Xuchang Shangke Chemical Co., Ltd. bụ na 2008, nke dị na Fine Chemical Industrial Park nke Zhangpan Town, Xuchang, Henan Province, na 10 nde square mita, ego niile nke 10 nde US dollar, na karịa ndị 100 ọrụ.
Shangke Chemical bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ọgwụ na-arụ ọrụ (APIs). Iji chịkwaa àgwà n'oge mmepụta, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọkachamara nwere ahụmahụ, ngwá ọrụ mmepụta mbụ na ụlọ nyocha bụ isi ihe. N'okpuru ụkpụrụ nke ISO 9001: usoro nhazi 2015 na njikwa nlezianya, ngwaahịa ndị dị elu na-enyere anyị aka ịbawanye na United States, Europe, Japan na mba ndị ọzọ, maka ụlọ ọrụ nyocha obodo na ụlọ ọrụ ọgwụ, anyị na-enyocha kwa mgbe enwekwu ohere iji nyekwuo ndị ahịa aka.
Site na nkà ihe ọmụma ya banyere ihe ọhụrụ na nchedo gburugburu ebe obibi, Shangke Chemical na-agba mbọ iji mezuo oke ọrụ ya maka ahụike mmadụ, yana echiche nke "nchepụta sayensị na teknụzụ, nchedo gburugburu ebe obibi, eziokwu na ntụkwasị obi, yana mmepe nkịtị", raara nye ndị ahịa. n'ụlọ na mba ofesi jiri ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, ngwaahịa dị mma na ọrụ aka ọrụ.
Ndị ahịa Shangke Chemical agbasawanyela na North America, Europe, India, anyị na-agagharị ma na-agbasi mbọ ike.
Companieslọ ọrụ na-agbaso echiche nke "ihe omimi sayensị na teknụzụ, nchedo gburugburu ebe obibi ndụ ndụ, na-eme ihe n'eziokwu ma nwee ntụkwasị obi, yana mmepe nkịtị", raara nye ndị ahịa ụlọ na mba ofesi ọnụ ahịa ezi uche dị na ya, ngwaahịa dị mma na ọrụ ọrụ aka ọrụ.
Afọ 20 nke ụlọ ọrụ ahụmahụ.
Emepụta Ụlọ ọrụ
ISO9001: 2000 na akara cGMP.
Ngwaahịa a dị oke mma ma nwee sayensi kachasị ọhụrụ
na mmezu nke teknụzụ.
magburu onwe Service
Ngwa ahia, mbelata ọnụahịa anaghị ada ọrụ.